Uyibona njani i-ip yoluntu kunye neyabucala kwiLinux kunye noBuntu-Ikkaro
yokuqalisa >> software >> Linux >> Uyibona njani i-IP kwiLinux
Isihloko sokwazi, okanye ukufumana i-IP esinayo yinto ephindaphindiweyo. Makhe sibone indlela yokwenza kwisixhobo seLinux.
Kweli nqaku ndiza kukufundisa indlela yokukhangela i-IP yoluntu kwisiphequluli, kunye ne-console kunye nendlela yokuyifumana kwaye uyigcine kwiincwadi zethu ze-.sh nge-BASH.
Ukongeza koku, siza kubona kwakhona indlela yokujonga i-IP yethu yabucala kunye nomahluko phakathi kwezi zimbini.
kawonke-wonke vs IP yabucala
Uluntu okanye i-IP yangaphandle yi-IP esichongayo ngaphandle kwenethiwekhi yethu. Abanye abantu baya kuyibona njani i-router yethu.
Ngakolunye uhlangothi, i-IP yangasese, yangaphakathi okanye yendawo (yibize into oyifunayo) yiloo nto i-router eyabela isixhobo ngasinye esiqhagamshelwe kuyo.
Ngaloo ndlela, yimeko yokuba isixhobo ngasinye kuthungelwano sine-IP eyahlukileyo yabucala kodwa i-IP efanayo yoluntu eyabelwe umzila.
Uyibona njani i-ip yoluntu
Kukho iindlela ezahlukeneyo. Khumbula ukuba i-IP ifana nedilesi yendlu yethu. Akufanele wenze lula ngenxa yokuba. Ngokomzekelo, i-ips oyibona kwimifanekiso yenqaku ayiyona yam, ndiyitshintshile usebenzisa i-TOR ukuze kungabikho mntu uyazi i-IP yam.
Amanqaku anxulumeneyo kwiwebhu Bhrawuza ngeTor y seta ummeli
Le yindlela yemveli. Xa ufuna ukwazi i-IP yakho, ukuba uvaliwe kwinkonzo, njl njl. Khangela kuGoogle Yintoni i-ip yam okanye Yintoni i-ip yam kwaye xa ungenisa naziphi na iziphumo zokuqala baya kusinika yona.
Okanye faka enye yezi dilesi.
Yintoni ip yam
Ngomyalelo we-curl. Ngokulula njengokubiza iiwebhusayithi ezithile ezibuyisela i-IP
Iiwebhusayithi esinokuthi sizibize ukuze sifumane i-IP kwakhona
Zininzi ngakumbi ukuba unomdla wokwazi ngakumbi ndenza ukuhlanganiswa.
Kwaye ukuba ufumana impazamo kuba awunayo i-curl efakiweyo, ungayifaka nayo
Enye indlela yokufumana i-ip kwi-CLI, masiye kwi-terminal, usebenzisa wget umyalelo. Kanye njenge-curl esinokuyisebenzisa
Gcina i-IP yoluntu kwi-BASH
Ukuba ufuna ukufumana kwaye ugcine i-ip yayo kuguquguquko isikripthi se-.sh kwi-BASH ungasebenzisa umzekelo le khowudi ilandelayo
kwaye siya kuba ne-ip yoluntu kwinguqu elungele ukuthelekisa okanye ukwenza nantoni na esiyifunayo.
Uyibona njani i-ip yabucala
Sele sibonile ukuba i-IP yangasese yiyona i-router eyabela isixhobo ngasinye kwinethiwekhi, ngoko ke ukuba sifuna ukwenza nawuphi na umsebenzi womnatha kuya kufuneka siyazi i-IP yethu yendawo. Njengamaxesha onke kwiLinux sineenketho ezahlukeneyo zokufumana izinto. Ndishiya okwaziwayo.
Eyona ngqo. chwetheza kwi-terminal
Ngalo myalelo ulula
Kumfanekiso ungabona ukuba i-console ibuyisela ntoni kunye ne-IP yethu yangasese ephawulwe ngobomvu.
nge ip indlela
Olunye ukhetho kukusebenzisa
Njengokuba nge-ifconfig, ndiye ndabalaselisa i-IP yangasese ebomvu, kwaye ngokuqinisekileyo, ii-IP ezimbini ezifunyenwe ngeendlela ezahlukeneyo kufuneka zifane.
Ukuba ufuna enye into malunga ne-IP, okanye ufuna ukwabelana ngendlela, shiya uluvo.
Uqhuba njani .sh iifayile
Indlela yokuhamba nge-ip yelizwe esifuna ngalo nge-TOR
izigaba Linux Ukuhamba kwetikiti
Uyenza njani umazibuthe we-electro
1 kawonke-wonke vs IP yabucala
2 Uyibona njani i-ip yoluntu
2.1 Ukusuka kwisikhangeli
2.2 Ukusuka kwisiphelo
3 Gcina i-IP yoluntu kwi-BASH
4 Uyibona njani i-ip yabucala
4.1 ngegama lomninimzi
4.2 nge ifconfig
4.3 nge ip indlela